Geelle: Waxa jira saddex qodob oo ay tahay inay dawladu ka soo saarto
Musharax Hogaamiye Daahir Maxamuud Geelle ayaa maanta oo Axad ah shir jaraa’id ku qabtay magaalada caasimada ah ee Muqdisho, isagoo eedeyn kulul u jeediyay dowladda uu hogaamiyo Hogaamiye Maxamed C / llaahi Farmaajo.
Geelle oo soo noqday wasiirka warfaafinta xiligii madaxweyne farmaajo iyo safiirka soomaaliya ee sacuudiga ayaa sheegay in dowlada ay qorsheyneyso sedex qodob iyo sedex qodob oo ay tahay inay fuliso.
Wasiirkii hore ee warfaafinta wuxuu sheegay in dowladdu qorsheyneyso inay ka baxdo Puntland iyo Jubaland, oo aan la qaban doorashooyin sharci darro ah iyo inaan dib loo dhigin doorashooyinka Federaalka.
Geelle wuxuu sheegay in lataliyaha guud ee madaxweynaha uu muhiim u yahay hirgalinta doorashooyinka loodhan, doorasho xalaal ah iyo in la qabto doorashooyin badan oo looga hadlayo kooxaha somalia.
Geelle ayaa sheegay in musharixiinta madaxweynaha Soomaaliya ay doonayaan in dalka ay ka dhacdo “doorasho furan”.
“Dooni meyno dowlad xoog leh oo ka dhisata gobollada Mudug iyo Baraawe, waxaan dooneynaa dowlad adag oo ka dhalata Jamhuuriyadda Soomaaliya. Hogaamiyaha waxaa looga baahan yahay inuu noqdo mideeye, ee uusan noqon mid diidan.” ayuu ku daray Safiirka.
Dowladda Soomaaliya oo ay wehliyaan Madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabeelle & Koonfur Galbeed ayaa go’aansaday in la galo doorashada, taas oo ay aad uga xumaadeen musharixiinta iyo hogaamiyaha Jubbaland halka madaxweynaha Puntland uu ka aamusanyahay.
Lama oga sida hanaanka doorashada looga heshiiyay Hogaamiyaha Soomaaliya Shariif iyo dowladiisa, “waxay rabaan inay dhacaan,” sida ay ku tilmaameen mucaaradka, halka kuwa diidan ay diidan yihiin.
Aspect Results of Consuming Alcohol Earlier than and After